Grafayithi iidrode, Grafayithi Iziko, Grafayithi Ezicwangcisiweyo Izahlulo - Yidong
Sinceda ihlabathi likhula ukusukela ngo-2012
RP Umsizi electrode
UHP grafayithi electrode
Ukufakwa kwe-elektrodi ye-Graphite
Ingono ze-graphite electrode
Grafayithi ezimilise iindawo
Inkxaso yeminxeba + 86-13212161818
Inkxaso ye-imeyile yidongcarbon@163.com
Iimveliso zeCarbon Yidong Co, Ltd.
Iimveliso zeCarbon Yidong Carbon Co., Ltd.isigrafiti somenzi we-elektrode kunye nokuthumela ngaphandle ukusukela ngo-2012 Ifumaneka kwisiXeko saseHandan, kwiphondo laseHebei apho yaziwa ngokuba yiChina Umzi mveliso weSiseko seCarbon. Ukugcwala kulungele kwaye kusondele kakhulu eTianjin Izibuko.
Sigxile ekuqhubeni nasekuveliseni i-electrode ze-graphite kunye ne-carbon electrode.Our iimveliso zithengiswa kakuhle e-China kwaye zithunyelwa kwi-Asia-mpuma ye-Asia, eMiddle East, eRashiya naseMelika.
Iimveliso zecarbon zeYeeong Yidong Co., Ltd ihlala ihambelana nomoya weshishini "lokuxhamla ngokufanayo, abantu abajolise ekufuneni ukugqwesa".
Sinamava iinjineli kunye nenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kwaye uqinisekise ukuba umgangatho wethu uhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.Ngokukwanjalo sinokunikela ngesisombululo sethu sokupakisha kunye nokuhamba.
Iimveliso zeCarbon Yidong Carbon Co, Ltd.isigrafti yomvelisi we-elektrode kunye nokuthumela ngaphandle ukusukela ngo-2012.
Ngequbuliso: i-elektroniki ye-graphite ye-India ...
Ukunyusa iindleko kunye neenzuzo ezingonelanga ...
Imarike intonga grafayithi electrode jikelele ...
Inkampani yethu iqale ngokusemthethweni ukusebenza ...
Imarike grafayithi electrode uya mainta ...